Nzira 5 dzekuti Kuteerera Zvemagariro Kunovaka Iyo Yekuzivisa KweBrand Unonyatsoda | Martech Zone
Mabhizinesi anofanirwa kuve ave kuziva kupfuura nakare kose kuti kungoongorora vezvenhau vachiyedza kusimudzira kuzivikanwa kwechiratidzo hakuna kukwana zvakare.
Iwe zvakare unofanirwa kuchengeta nzeve pasi kune izvo izvo vatengi vako vanonyatsoda (uye vasingade), pamwe nekuramba uchiziva zveazvino maindasitiri maitiro uye makwikwi.
Pinda kuteerera kwevanhu. Kusiyana nekungotarisisa, uko kunotarisa kutaurwa uye nemitengo yekubatanidzwa, nzanga yekuteerera zeroes mukati memanzwiro ari seri kweiyi data. Ngatipindei mutsika iyi uye tione kuti nei zvichikosha.
Chii chinonzi Brand Kuzivisa?
Kuziva kweBrand ingori huwandu hwevanhu vanoziva nezve rako bhizinesi uye vanoziva kuti riripo. Izvo hazvina basa kana vakanzwa nezvako, kana kuziva kuti ndiwe ani, kana kana vachinzwisisa zvaunoita.
Kana zvasvika pakuvaka chiziviso cherudzi, zvakakosha kuti ugadzire mufananidzo wekambani yako iyo inobvumidza iwe kubatana nevatengi padanho repamoyo.
Kuvaka mhando chinhu chakakosha pakushambadzira pamhepo. Izvo zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti vanhu vanoziva kuti iwe ndiwe ani uye chii chako chiratidzo chinomiririra. Zvinozovabatsira kuti vavimbe newe uye vatende ruzivo rwaunopa.
Iyo zvakare inzira yakanaka yekuwedzera vateereri vako uye kumisikidza kuvimba nevanhu vanotoziva iwe.
pasina brand awareness, kana vatengi vakakuwana, vanogona kusaziva kana kuvimba nechako chigadzirwa kana sevhisi.
Kuzivikanwa kweBrand kunoenzaniswa sei?
Ngatitangei nehuwandu hwemamaki ekuziva mhando, ayo anofanirwa kukupa iwe kunzwisiswa kwakawanda kweako marandiro ekuona online.
Tarisa kuwanda kwezita rako rechiratidzo uye uko vashanyi vako vanobva. Nzira iri nyore yekuita izvi ndeyekutevera yakananga traffic (chero traffic inoenda yakanangana newebsite yako pasina kuendesa kubva kunjini yekutsvaga kana pasocial media) nematurusi akaita seGoogle Analytics neGoogle Search Console.
Nezvishandiso izvi, unogona kutarisa chinzvimbo chako cheinjini yekutsvaga, kusanganisira huwandu hwevanhu vanyora webhusaiti yako zvakananga mubhawa rekutsvaga.
Inokodzera brand brand metrics, kune rumwe rutivi, yakaoma kuyera.
Kuti uwane mufananidzo chaiwo weichi chiratidzo cheveruzhinji, tarisa zita rako pamhepo uye wongorora mhinduro yemutengi wako, zvingave zvakanaka, zvisina kunaka, kana zvematongerwo enyika.
Shandisa ezvemagariro mapuratifomu senge Facebook neTwitter kuteedzera yako yemhando kutaurwa. Nekutevera huwandu hwezvakataurwa pamwe neako mushandisi manzwiro, unogona kubatanidza iwo madota pakati pevatengi vako tarisiro uye kugutsikana.
Asi kutarisa pamasocial media chete kunokwana here kuti unzwisise ruzivo rwako rwechigadzirwa?
Apa ndipo apo kutarisana nevanhu inouya inobatsira.
Kuteerera munharaunda ndiko iwe paunoteerera kune yako marita kutaurwa kuti unzwisise zvirinani izvo vanhu vanofunga nezve ako zvigadzirwa uye masevhisi.
Kuteerera munharaunda kunoshanda sei? Kazhinji iwe waizoteerera kuzita rako rezita, vakwikwidzi uye mazwi akakosha ane chekuita nebhizinesi rako. Asi iwe hauzoite izvi chete pasocial media. Iwe unogona zvakare kuteerera munharaunda pane akati wandei akasiyana masosi, kusanganisira mablog, maforamu masaiti, uye chero kumwe kunhu paInternet.
Iwe unozoshandisa iyo data yawakaunganidza kuteedzera inotevera chiito sekuronga yako yemukati kushambadzira kuti ushandire zvirinani vateereri vako kana kugadzirisa chigadzirwa chako kana sevhisi munzvimbo yekutanga.
Mune mamwe mazwi, kuteerera munharaunda inzira inokurumidza kwazvo kuona zviri kutaurwa nevatengi vako pamusoro pechiratidzo chako uye kuziva zivo dzichangoburwa muindastiri yako, pamwe nekukwikwidza kwako.
Kuterera munzanga kwakafanana chaizvo nevezvenhau vezvekutarisisa mune zvekuti iwe urikutsvaga maricho kutaurwa; Izvo zvakare zvakasiyana, mukuti inotarisa pamanzwiro ezvezvi kutaurwa kunhonga bhizinesi-rakakosha nzwisiso.
Nekudaro, heino mashandisiro emabhizimusi ekuteerera kwenzanga kuvandudza ruzivo rwavo rwechiratidzo.
Nei maBrands Achibvumirira Kuterera Kwemagariro?
Kuziva marwadzo - Nekushandisa kuterera munzanga, unogona kuongorora kana paine chinhu chisipo icho vatengi vari kutsvaga uye icho chisina kugadziriswa neyako kana yako yavanokwikwidza 'chigadzirwa. Ipapo, iwe unogona kutora mukana weiyo dhata kune pivot uye nekuvandudza yako yekushambadzira zano kuti ugadzirise chaizvo izvo izvo vako vangangove vatengi vari kutsvaga. Kushandisa Google Alerts chete kuongorora yako yazvino indasitiri uye marangi hazvina kukwana mazuva ano, seGoogle Alerts 'frequency uye kukosha kunogona kunge kusiri kwenzvimbo dzimwe nguva. Nekushandisa chishandiso chakaomesesa senge Awario, iwe unogona kuteedzera zveazvino kuitika mune yako indasitiri pamwe nekuongorora vako vakwikwidzi zvakanyatso nyatso.
Kutevera Dzazvino Maitiro - Kungoziva kuziva marwadzo emutengi wako hakuna kukwana. Iwe zvakare unofanirwa kuziva zviri kubuda mune yako indasitiri kuitira kuti iwe ugone kukwira pamwe nekutora vateereri vako nenzira iyoyo. Iwo mazwi akakosha uye misoro yaunotarisa inowanzo shanduka nekufamba kwenguva. Kuti uwane mamwe maonerwo kubva kune akawanda masosi panguva imwe chete, zvishandiso zvakaita seAwario zvinokubatsira iwe kutsvaga mazwi akakosha uye misoro vanhu yavanowanzo kushandisa mune akati wandei zvitoro zvepamhepo.
Vandudza Vatengi Sevhisi - Haisi chakavanzika chekuti vatengi vanotendeukira kumasocial media kunogunun'una nezve zvigadzirwa. Ongororo yakaitwa na JD Simba Ratings vakawana kuti 67% yevanhu vanoshandisa vezvenhau kutsigira vatengi; Kukura Kwemagariro vakawana kuti 36% yevanhu vaive neruzivo rwakashata nekambani vaizotumira nezvazvo pasocial media. Nekushandisa kuteerera munharaunda, iwe unozogona kuwana zviri nani nzwisiso pane zviri kutaurwa nevateereri vako nezve chigadzirwa chako kana kambani zvese Izvi zvinopa mikana isingaperi yechiratidzo chako kuti ivandudze kwete kungopa kwako chete asiwo nemabatiro aunoita mhinduro dzevatengi uye zvichemo.
Kugadzira Zvitsva Zvitsva - Mushure mekunge mapinda mukuteerera munharaunda, iwe ungashamisika kuona kuti mutengi mutsva anokwanisa kuuya pavanenge vachitsvaga kurudziro yechigadzirwa.
Kutengesa Zvemagariro Nemashoko Akakosha - Uine rubatsiro rwekuteerera munharaunda, unogona kuteedzera mamwe mazwi akakosha anoshandiswa nevatengi kutsvaga matambudziko avo uye nekumisikidza hurukuro dzakadzama navo kutengesa munharaunda. Usatengese-zvakaoma pakutanga, asi panzvimbo pezvo, goverana ruzivo runobatsira rwavanofarira. Izvi zvinokubatsira iwe kupa yako mhando seyakanakisa sosi kana nguva yasvika yekutora sarudzo yekutenga.
Kuti uwedzere ruzivo rwechiratidzo chako, unoda kuterera munharaunda. Pasina kuterera munzanga, haungakwanise kuziva izvo zvimire kumashure kwezita rechiratidzo chako, uye ndezvipi zvakanaka uye chii chisiri chekupa kwechiratidzo chako.
Kuteerera munharaunda kunobatsirawo zita rako kusimuka kubva mumakwikwi nekutendera iwe kuti uteedzere mafambiro azvino uye marwadzo evatengi muindasitiri yako, uye uashandise iwe kubatsira. Ngatitarisei zvimwe zvezviitiko zvekuti imwe yeaya mabhenefiti ekuteerera mabhenefiti akawanikwa sei emhando.
Yemagariro Kuteerera Yenyaya Chidzidzo: Tylenol Inozivisa Marwadzo Points (Chaizvoizvo)
Chiratidzo chekurapa, Tylenol, yaida kuona kurwadziwa uye kushungurudzika kwevanhu vanotambura nemusoro wekutambudzika. Kubva kune yayo tsvakiridzo yekuteerera munharaunda, Tylenol akawana kuti vapfumbamwe muvanhu vakuru gumi vanozotemwa nemusoro pane imwe nguva uye kuti vana vaviri muvatatu vacharwadziwa nemusoro pazera remakore gumi nemashanu.
Tylenol akashandisa iro ruzivo kuti arambe aripo Marketing nzira nekusika gutsikana yakakomberedza iyo pain pain.
Yemagariro Kuteerera Nyaya Yekudzidza: Netflix Inozivisa Millenial Trends
Netflix inoshandisa kutarisana nevanhu kuongorora zvimiro zvechizvino-zvino pakati pevateereri vavo - mamirioni- uyezve vanovakurudzira kunyorera kuchikuva chavo. Iyo kambani yakakwanisa kutora iyo Gerard Way maitiro paTwitter nekushandura yayo Twitter bio kuti vateereri vataure nezveNetflix brand.
Verenga Yakazara Netflix Nyaya Yekudzidza
Zvekuteerera Zvekuteerera Nyaya Yekudzidza: Maodzanyemba akadziva kumadokero Anogadzirisa Vatengi Nhau Dzevhisi
Maodzanyemba akadziva kumadokero Airlines anoteerera kune zvichemo zvevatengi vavo pane vezvenhau.
Semuenzaniso, mutengi anonzi William posted tweet nezve kutiza kwake kubva kuBoston Logan International Airport kuenda kuBaltimore Washington International Airport, sezvo akacherekedza kuti ndege iyi yanga ichiri tekisi muChicago.
Anna, mumiriri weboka renhandare yendege, akacherekedza ndokupindura iyo titter maminetsi gumi nerimwe gare gare.
Akajekesa kuti ndege yake yaifanirwa kudzokera kuChicago nekuda kwekuchengetedzwa, asi akaedzawo nepese paanogona napo kuti mutengi akwanise kubhururuka nekukurumidza sezvinobvira.
Mushure meimwe tweet kubva kuna William achibvunza kana zvaibvira kuchinjisa ndege ya8: 15 mangwanani kuenda kunzvimbo imwechete, Anna akatarisa kuti aone izvo timu yake yaigona.
Akatendawo William nekuzivisa kambani yendege nezvenyaya iyi, uye akatenda mhinduro yake nekukasira.
@SouthwestAir chii chiri kuitika neFlight SWA 4919 BOS kuenda kuBWI? Zvinoita kunge ndege inopinda ichiri tekisi muChicago ...
Pakazara, maitiro ese ekugadzirisa chichemo chemutengi ichocho chakatora maminetsi gumi nematanhatu.
Yemagariro Kuteerera Nyaya Yekudzidza: Zoho Backstage Drives Inotungamira
Zoho Backstage, yepamhepo chiitiko manejimendi software, yakasvika kune tweet kubva kumushandisi anonzi Vilva kukurudzira kuyedza chigadzirwa chavo. Vilva aiziva kuti aigona kushandisa Eventbrite kubata kunyoreswa kwemusangano wake, asi aitsvaga dzimwe nzira dziri nani.
Zoho Backstage yakawedzera kuti chigadzirwa chacho chaive chikamu chesoftware yavo (Zoho Suite) uye kuti chaigona kumubatsira nekuita mashopu, misangano, zvigadzirwa zvechigadzirwa, kana chero kumwe kuungana kudiki / kukuru.
Hi @vilvaathibanpb, wakaongorora here @ZohoBackstage zvakadaro? Icho chikamu che @Zoho suite uye inokubatsira kumhanyisa mashopu, misangano, zvigadzirwa zvechigadzirwa, kana chero kumwe kuungana kudiki / kukuru.
Ndingafarire kuziva zvakawanda nezve zvaunoda! DM kana email nesu pa support@zohobackstage.com.
Vakapedzisa tweet yavo nekufona kuti vaite, vachibvunza Vilva kuti avazivise zvaaida nekuvatumira Twitter DM kana email.
Awario Yemagariro Media Njere uye Ongororo
Awario chishandiso chekuteerera chinopa mabhenefiti mukana we data iro rakakosha kune bhizinesi ravo: nzwisiso kune vatengi vavo, musika, uye vakwikwidzi.
Tsvaga Zvakawanda Nezve Awario's Yemagariro Ehungwaru Platform
kuburitsa: Martech Zone mubatanidzwa we Awario uye kushandisa yayo yakabatana link mune ino chinyorwa.
Tags: awariomuchisobrand awarenesstevedza twitter maitirogadzira matsva matsvatsvaga marwadzo ekurwadziwakunatsiridza vatengiinbound MarketingNetflixkutarisana nevanhumagariro ekuteerera nyaya dzedzidzomagariro kuteerera mazwi akakoshatsvakiridzo yekuteerera munharaundaevanhu vezvenhaumagariro enhau analyticssocial media njereTwittertwitter vatengitwitter inotungamira chizvarwatwitter maitirotylenolchii chinonzi brand kuzivachii chiri kuteerera munharaundazoho backstage